उमेर छ महिना एउटा बच्चा सक्रिय उहाँको वरिपरि दुनिया सिक्न सुरु, पाठ्यक्रम मा सुनवाई, दृष्टि गन्ध को अंगहरु, हो, संवेदनशीलता स्वाद। यो समयमा, बच्चा आफ्नो बाटो मा पूरा गर्ने सबै बढेको ब्याज देखाउँछ। यो समय कीडे संग संक्रमण को जोखिम वृद्धि, आफ्नो स्वास्थ्य गर्न सबैभन्दा खतरनाक छ।
र यो एक धेरै कदम र आफ्नो साथीहरूको कुराकानी गर्न सुरु रूपमा बच्चा पुरानो, महान् संक्रमण को likelihood। कसले अनुसार, पुराना बच्चाहरु अन्तर्गत तीन वर्ष यो रोग भन्दा susceptible छन्। त्यसैले खतरनाक कीडे के हो? लक्षण र सजिलो पहिचान गर्न आफ्नो कारण?
परजीवी कीडे: विशेषताहरु र प्रजाति
कीडे को प्रकार, मान्छे, धेरै, अधिक दुई सय, तर तिनीहरूलाई केही अत्यन्तै दुर्लभ मात्र केही क्षेत्रमा छन् हानिकारक। सीआईएस देशहरुमा र रूस ज्यादातर परजीवी roundworms, वा nematodes मा। - कीडे कारण सबै भन्दा साधारण रोगहरु (रोगजनक hymenolepiasis छन् बौना tapeworm) र enterobiosis (रोगजनक - pinworm)।
स्थानान्तरण, प्रायजसो त्यहाँ बिरामी बच्चा देखि सम्पर्क-घरेलू बाटो एक स्वस्थ गर्न साधारण वस्तुहरु (खिलौने, लुगा, भाँडा) प्रयोग गर्दा हो। साथै, बच्चा रोगी संग एउटै कोठामा रहेको र धूलो मा सास द्वारा संक्रमित बन्न सक्छ। तर enterobiasis (pinworms) एक व्यक्ति फोहोर हात वा नधोएका खाद्य पदार्थ मार्फत "इनाम" आफूलाई सक्छन्।
विभिन्न अङ्गहरू मा परजीवी कीडे केही समूह। Cestodes (बौना, bovine, porcine tapeworm) र nematode (Ascaris, Ancylostoma, strongiloidy) को पेट बसाबास गर्नु। Flukes को biliary पर्चा र कलेजो मा अवस्थित छ। पोर्क tapeworm लार्वा रगत नली, फैटी पुछ्ने, मस्तिष्क र आँखा कोठामा मा सञ्चय छन्।
बाल्यकाल मा, सामान्यतया trematodes (flukes) र टेप कीडे निदान। कारण एलर्जी प्रतिक्रिया गर्न तीव्र चरण (2-3 सप्ताह) मा लक्षण। उचित उपचार को अभाव मा धेरै महिना पछि रोग को पुरानो चरण सुरु हुन्छ।
क्लिनिकल manifestations रोगजनकों को संख्या र स्थान, साथै आफ्नो खाना को विशेषताहरु भर पर्छन्। कि अंगहरु र शरीर को Tissues छन् कीडे, squeeze र तिनीहरूलाई चोट, नशा पैदा। यसबाहेक, परजीवी पूर्णतया यसरी चूषण तोडने को आंतों पर्चा तिनीहरूलाई प्रक्रियाहरु र यस्तो रक्तअल्पता र भिटामिन कमी रूपमा विकार पैदा, रगत देखि आ सबै पोषक अवशोषित।
को पुरानो चरण मा पनि मानव helminths आफ्नो हानिकारक प्रभाव जारी। वयस्क मा लक्षण बच्चाहरु मा रोग को लक्षण देखि लगभग कुनै फरक छ। प्रतिरक्षा प्रणाली जसबाट, जीवाणु भाइरल र फंगल संक्रमण को रोगजनकों गर्न प्रतिरोध कम, कमजोर छ। र स्थानीयकरण को साइट मा घातक ट्यूमर गठन सक्षम कीडे केही प्रकार।
छोराछोरीको आंतों nematodes
परजीवी रोगहरु को 90% भन्दा ठीक nematodes प्रकुपित। 15 सेमी लामो गर्न परजीवी को चुच्चा समाप्त संग राउन्ड - यो समूह roundworm समावेश छ। तिनीहरूले सेतो र पारदर्शी रंग मा आउन एक स्थायी कदम बनाउने, सानो आन्द्रा बाँचिरहेका छौं।
बरु गाह्रो भएको मल तिनीहरूलाई पत्ता लगाउन। तपाईं बारम्बार helminths मा मलको पारित गर्न आवश्यक रोग निदान गर्न। चिकित्सकीय उपायहरूको कार्यान्वयन बिना आफ्नो जीवन को अवधि2वर्ष हुन सक्छ।
यो सानो (1 सेमी) बाङ्गो कीडे whitish ह्यु। मुख्यतया सानो आन्द्रा र पेट मा पाइन्छन्। अक्सर तिनीहरूले बच्चाको मलको अवलोकन गर्न सकिन्छ। र रात समयमा तिनीहरूले लार्वा राख्नु गर्न छाला को सतह मा बाहिर छिर्न। बालिका अक्सर संक्रमण र श्लेम लाग्एको झिल्ली को गंभीर जलन कारण जनन कीडे भित्र पस्नु।
रोग enterobiasis भनिन्छ। यसलाई चिकित्सकीय कारबाही भने,3वर्ष लाग्न सक्छ। pinworm जीवन छोटो छ हुनत, तर आस्थगित लार्वा को भारी रकम कारण, आफ्नो नम्बर चाँडै पुनर्स्थापित भएको छ।
बच्चालाई कीडे प्राप्त कसरी?
छोराछोरीको, साना पृथक व्यक्तिहरूको उपस्थिति को लक्षण मिट, तर तपाईं ठूलो कीडे को intestines बस्न भने, क्लिनिकल तस्वीर बरु उच्चारण गरिएको छ। विशाल आक्रमण संग Ascariasis यांत्रिक पीलिया, pancreatitis, र आंतों बाधा जटिल। Enterobiasis विशेष गरी सुत्दा, गंभीर perianal खुजली द्वारा विशेषता छ। प्रसारण को मार्ग - ड्रम।
परजीवी अन्डा संक्रमित जनावर र मानिसहरूलाई को मलको साथ वातावरण मा प्राप्त। लार्वा को सूक्ष्म आकार बाहिर धेरै प्रतिरोधी हो, त्यसैले समय लामो अवधि माटो, उत्पादन, छाला वा कपडाको यसको स्वयंसमर्थता कायम गर्न सक्छ। बच्चालाई मुखबाट गुहा मा रही, तिनीहरूले पेट को अम्लीय वातावरण को आंशिक विनाश subjected छन्। को आन्द्रा मा मर्मज्ञ, तुरुन्तै सक्रिय र गुणन गर्न सुरु गर्दै हुनुहुन्छ।
विशेष grudnichki र बच्चाहरु छ को उमेर सम्म कीडे गर्न susceptible छन्। Toddlers अझै पनि जठरांत्रिय बाधा अल्पविकसित। यो दृष्टिकोणबाट, आमाबाबुले राम्ररी आफ्नो आफ्नो बच्चा को स्वच्छता निगरानी गर्नुपर्छ वा उनको शरीर खतरनाक कीडे penetrated छैन। लक्षण थकान, कमजोरी, भोक र फीकापन को हानि रूपमा छन्।
अक्सर, डाक्टर आमा मा त्यो बच्चाको मलको सानो कीडे वा pinworms निश्चित फेला कि रिपोर्ट। यो अवस्थामा, डाक्टर तुरुन्तै कीडे र सही रोग निदान र उपचार गर्न scraping मा विश्लेषण नियुक्त गर्नुपर्छ। बच्चालाई को अप्रत्यक्ष manifestations पनि अक्सर helminthic आक्रमण बारे आमाबाबुले चेतावनी। कुनै स्पष्ट कारण (पखाला, कब्जियत), चक्कर आना लागि बारम्बार वाकवाकी, लालास्रवण, असामान्य लाभ वा भोक, मल विकार: यी निम्न समावेश गर्नुहोस्। साथै, अन्तर्गत-आँखा सर्कल, paleness, टाउको दुखाइ, cramping को नाइटो मा दुखाइ, थकान - संक्रमण सबै बिन्दु। परजीवी अक्सर एलर्जी प्रतिक्रिया कारण, र त्यसपछि बच्चा सुरु dermatitis, rashes, diathesis।
कीडे अन्य लक्षण
मा बालिका, सबै यो बाह्य जननांग को सुनिंनु सँगसँगै छ। छोराछोरीको, त्यहाँ wanton स्नायु irritability, whims, दाँत को gnashing, गरिब सुत्न, चीखें र tantrums सँगसँगै छ। गुदा क्षेत्रमा लगातार खुजली बच्चालाई बेचैनी सुनाउँछन्।
टर्मिनल helminths द्वारा संक्रमण लक्षण कहिलेकाहीं hematuria (urination को अन्त मा रगत थोपाहरूबा), बारम्बार चाहनाको र पीडा समावेश गर्नुहोस्। त्यहाँ सुनिंनु, ऐंठन, रक्तपातपूर्ण मल हुन सक्छ। Cysticercosis, hydatid alveococcosis र अक्सर एक लामो समय को लागि आफूलाई प्रकट छैन, तर एक समय पछि, एक व्यक्ति peritonitis, anaphylactic आघात र अन्य गम्भीर परिणाम गर्न प्रमुख, विद्रधि वा सानो ट्युमर बिच्छेद, जो परजीवी छन् आउँछ।
छोराछोरीको कीडे (बच्चाहरु को एक तेस्रो लक्षणहरु समान छन्) अक्सर वर्णन घटना द्वारा विशेषता छन्। केही समयको लागि कुनै उजुरी छन्। कीडे बिस्तारै बच्चा को शरीर विष। बाबु आमा सुझाव: रोग रोक्न एक प्रारम्भिक चरण त्यो त संक्रमण को मामला मा, हरेक वर्ष योजना निरीक्षण मार्फत जानुहोस्।
हार्ड आयोजित मलको निदान, यो कारण roundworm वा pinworm अन्डा हरेक दिन त्यहाँ देखा भन्ने तथ्यलाई छ। कीडे मा विश्लेषण को परिणाम को विश्वसनीयता लागि तीन लगातार दिनको लागि तिनीहरूलाई लाग्न गर्नुहोस्। परजीवी पत्ता लगाउन पनि सीबीसी मद्दत गर्छ।
हाम्रो circulatory सिस्टम संक्रमण helminth गर्न प्रतिक्रिया। यो निम्न संकेतक देखाएको छ: प्रत्यक्ष bilirubin, eosinophils, alkaline phosphatase, वृद्धि AST, Alt, thymol परीक्षण। साथै, निदान serological विधि (ELISA, Phragmites, राइफल्स) मा आधारित छ।
आवश्यक रगत कीडे को जीव रसायन विश्लेषण तोकिएको। पनि मूत्र नमूनाहरू, sputum, bile, perianal र rectal खकार र faeces अध्ययन। Enterobiasis टेप, swab वा स्पाटुला प्रयोग गरेर perianal Folds बाट लिएको छ जो सामाग्री मा लार्वा पत्ता निर्धारण गरिन्छ।
कि duodenum, bile वाहिनी, अग्न्याशय र कलेजो बस्ने परजीवी को bile र ग्रहणी सामग्रीहरू पत्ता सकिन्छ। गणना टोमोग्राफी, endobiopsiey संग एन्डोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड: थप विधिहरू आफ्नो habitats स्पष्ट गर्न प्रयोग गरिन्छ।
तपाईं लक्षण जस्तै बच्चाहरु (को perineum, पुरानो नशा को जलन को संकेत) हेर्न भने, समय निकाल्न छैन र तुरुन्तै चिकित्सा केन्द्र जानुहोस्। कहिलेकाहीं यस्तै नैदानिक तस्वीर अन्य रोग राज्य अमेरिका मा देखेको। मात्र पूर्ण परीक्षा पछि डाक्टर प्रभावकारी उपचार गर्ने सल्लाह दिन्छन् हुनेछ।
आधुनिक फार्मेसी लागूपदार्थ कृत्रिम लागूपदार्थ यो रोग विरुद्ध लड्न मद्दत गर्ने धेरै प्रदान गर्दछ। अत्यधिक प्रभावकारी राम्रो चाँडै मानिसहरूलाई मा कीडे मार्न। लक्षण उपचार को पूर्ण पाठ्यक्रम पछि गायब। परजीवी prescribers को प्रजाति आधारमा। संकीर्ण-स्पेक्ट्रम लागूपदार्थ लागि धन को तीन समूह हो: protivotsestodoznye, protivotrematodnye र protivonematodnye।
roundworms मा हानिकारक प्रभाव यस्तो लागूपदार्थ "Levamisole", "mebendazole", "Karbendatsim", "Pyrantel"। Worming ट्याब्लेटको कीडे को पक्षाघात कारण र आफ्नो तीव्र excretion योगदान।
यी औषधि समावेश "Praziquantel" र "Niclosamide"। यी औषधिहरू समतल परजीवी पंगु बना।
दबाइहरु "Perhloertilen" र "Hloksin" flukes विरुद्ध नियुक्त। यी औषधिहरू पनि कीडे चयापचय गर्न विषाक्त र लिएको गर्दा राम्रो अवशोषित छ।
यो निदान राख्न आफ्नो बच्चा उपचार गर्नुपर्छ हुन र पुन: संक्रमण जोगिन गर्न परिवारको बाँकी भने। साथै, तपाईंले सबै कीडे exterminated गरेको क्लोरीन-समावेश एजेन्ट र ध्यानपूर्वक ironed सनी संग अन्तिम सफाई गर्न पर्छ। लक्षण helminthic आक्रमण तुरुन्तै छैन देखा, त्यसैले होसियार र चनाखो हुन गर्नुभयो।
कीडे सबै प्रजातिका संक्रमण को रोकथाम को लागि आधार एक प्रारम्भिक बाल्यकाल स्वस्थ जीवन शैली (दैनिक स्वच्छता, तरकारी र फल राम्ररी लुगा धुने) सिर्जना गर्न छ। आफ्नो बच्चा washcloth प्रोत्साहन सडक तुरुन्तै जीवाणुरोधी साबुन र पानी संग आफ्नो हात धुन पछि मात्र आफ्नो आफ्नै तौलिया प्रयोग। कीडे द्वारा संक्रमित भएको संभावना छ जो सडक जनावर संग सम्पर्क गर्न आफ्नो बच्चा निषेध गरेको छ।
, घरमा बारम्बार भिजेको सफाई लिन आफ्नो बच्चा जूता खेल्न नदेऊ। Soapy पानी सबै खिलौने धुन। को पैदल मा ध्यान बच्चा आफ्नो मुखमा shoved छैन भनेर वस्तुहरूको विभिन्न हेर्नुहोस्। फोहोर उत्पादन र कच्चा मासु कहिल्यै प्रयोग गर्नुहोस्। यो परजीवी को एक वाहक हुन सक्छ देखि, केवल पूर्व-उसिनेर र फिल्टर पानी पिउन।
आधारभूत नियमहरू अनुपालन संक्रमण बाट आफ्नो बच्चाहरु रक्षा हुनेछ। वसन्त र शरद ऋतु मा - helminthiasis को रोकथाम पनि बाहिर दुई पटक लागूऔषधको प्रयोग गरेर एक वर्ष लगे। यी उद्देश्यका लागि "Albendazole" वा "Pyrantel" दबाइहरु। योजना निलम्बन 10 एमएल तीन दिनको लागि एक पटक दैनिक दिन, दुई वर्ष भन्दा पुरानो बच्चाहरु को लागि सामान्यतया, निर्देशनहरू मा निर्दिष्ट गरिएको छ।
रोग समयमा पोषण
निराश र डाक्टर को सबै सिफारिसहरू पालन - संक्रमण यदि तपाईं जोगिन, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्न असमर्थ छौं। आहार देखि डेयरी र चीनी सदृश खाद्य पदार्थ निकाल्न। थप प्रस्ताव बच्चा ताजा रस, फल र तरकारी। दैनिक फलाम को बिस्तर। उचित मोड घट्दैछ रोग संग।
परम्परागत चिकित्सा पनि मानिसहरूलाई (लक्षण माथि वर्णन) मा कीडे नष्ट गर्न मद्दत गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि, यो लामो समय कीडे लसुन, सेज, tansy, प्याज र pumpkins को गंध खडा गर्न सक्दैन ज्ञात छ। उपलब्ध घटक तपाईं एक दबाइ र ठूलो दक्षता लागि पारंपरिक हालतमा यसको प्रयोग तयार गर्न सक्नुहुन्छ।
खैर यो प्याज जलसेक मद्दत गर्छ। प्याज सानो स्लाइस मा कटौती र न्यानो पानी एक गिलास खन्याउन। नास्ता खपत अघि यस्तो शोरबा एकै रातमा र बिहान Infused। खाली पेट मा कद्दू बीउ को एक मुट्ठी खान र हल्का रेचक औषधि गाउन सुरु - यो परजीवी विरुद्ध एक उत्कृष्ट उपाय छ।
अस्थमा उपचार छ वा छैन? अस्थमा कि बच्चाहरु पूर्णतया उपचार छ?
कसरी घर मा warts छुटकारा गर्न? धेरै प्रभावकारी निर्धारण
को कटि को Osteochondrosis: लक्षण, उपचार
हाम्रो बगैंचामा कुपन मल्टीफेलियो
Bifiform बच्चा, राय र सिफारिसहरू
"LMed", Novomoskovsk। क्लिनिक "एल-मह" Novomoskovsk: विरामीहरु र ठेगाना को समीक्षा
Bronchospasm: बच्चाहरु मा लक्षण
आफ्नै पियानोहरु कसरी स्थापित गर्ने?
Minivan "ओपल Zafira": विशिष्टीकरण, डिजाइन र मूल्य